07/15/2020 - 14:42
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကို (၁၅.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့ (၁၁:၄၅)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊
07/14/2020 - 16:01
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းသည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes အား (၁၄.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသော တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦးကို အမည်စာရင်းပြောင်းလဲလိုကြောင်း အမျိုးသား
07/01/2020 - 14:51
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ကာကွယ်ရေးအတွက် နှာခေါင်းစည်း (Mask) များ လက်ခံ
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ကာကွယ်ရေးအတွက် နှာခေါင်းစည်း (Mask) များ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို (၁.၇.၂၀၂၀)ရက်နေ့ (၁၃:၃၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမ
06/21/2020 - 20:29
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုနေပြည်တော်ရှိအမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ၌၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁၃)ရက်နေ့၊တနင်္လာနေ့ နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပရန် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကခေါ်ယူထားရာအဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်စာများကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ ပေးပို့ထားပါသည်။
06/21/2020 - 20:26
05/28/2020 - 09:47
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက (၂၇-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ (၁၆:၄၅)နာရီအချိန်တွင် (J)ဆောင် ထမင်းစားခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပါသည်။
05/26/2020 - 13:44
အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈/၂၀၁၉)ဖြင့် ကော်မတီအမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပအလုပ်သမား ဆိုင်ရာကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အစားထိုး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း----